Somaliland: Mayer Ciddin Oo Eeduyin Culus U Jeediyey Faysal Cali Waraabe iyo Duq G/Gabiley - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Mayer Ciddin Oo Eeduyin Culus U Jeediyey Faysal Cali Waraabe iyo...
Guddida Diwaangelinta Ururrada Siyaasadda iyo Ansixinta Axsaabta Qaranka oo ay hor-taallo Dacwad uu Xisbiga UCID ku oogayo 7 Xildhibaan oo Doorashadii Goleyaasha Deegaanka Xisbiga uga soo baxay Degmooyinka Dalka, balse dhawaan shaaciyey inay ku biireen Xisbul-xaakimka KULMIYE.
Xildhibaannada oo ay ka mid yihiin Maayarrada Magaalooyinka Gabiley iyo Berbera Maxamed-amiin Cumar Cabdi iyo Cabdishakuur Maxamuud Xasan (Ciddin), ayaa Xisbiga UCID doonayaa in laga saaro Goleyaasha Deegaanka oo lagu beddelo 7 Xubnood oo keyd ahaa, maaddaama oo ay ka baxeen Xisbigii ay Codka taageerayaashiisa ugu soo baxeen Goleyaasha Deegaannada Dalka.
Maayarka Magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan (Ciddin) iyo Maayarka Magaalada Gabiley Maxamed-amiin Cumar Cabdi oo Shalay la kulmay Guddida Diwaangelinta Ururrada Siyaasadda oo u yeedhay, ayaa Saxaafadda u sheegay in Guddidu siiyeen Nuqullo ka mid ah Dacwadda uu Xisbiga UCID ku oogayo, si ay u soo akhristaan oo ay uga jawaabaan.
Maayarka Berbera oo ugu horeyn Arrintan u faahfaahinaya Saxaafadda ayaa yidhi “Waxa noo yeedhay Guddida Diwaangelinta Ururrada Siyaasadda, waxay noo dhiibeen Warqad Dacwad ah, oo ay nagu soo dacweeyeen Cid Nidaamkooda Jiritaanba aanu Sharci ahayn. Labada Qodob ee la nagu soo dacweeyay Hal Qodobna indhaha ayaa laga qarsanayaa, Hal Qodobna indhaha ayaa arkaya. Faysal Cali Waraabe wuxuu sheeganayaa inuu yahay Musharraxa Madaxweynaha ee Xisbiga UCID, mana jiro Sharci dalkeenna yaalla oo u fasaxaya inuu mar (Saddexaad) Xisbiga u noqdo Musharrax Madaxweyne.”
Maayar Ciddin wuxuu sheegay in Xisbiga UCID ay leeyihiin Dadkii Codkooga ku soo saaray Xilligii la kala reebayey Ururrada Siyaasadda, “Xisbiga Dadkii Codka ku soo saaraybaa iska leh, Qof aan la dooranin oo aan Bulshadu u codeynin, ayaa Xildhibaannadii ka soo baxay Xisbiga Burush marinaya.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray “Waa lana soo dacweyn karaa, markaa Anagoo raacayna Shuruucda iyo jiritaanka Somaliland waxaanu Ayidnay inaanu Akhrino Dacwadda la noo soo gudbiyey, dabadeedna aanu akhrino oo aanu ka jawaabno.”
Maayarka Magaalada Gabiley Maxamed-aamiin Cumar Cabdi, ayaa isaguna yidhi “Waxaanu u nimid inaanu Aqballo yeedhista Guddida Diwaangelinta Ururrada Siyaasadda, su’aalaha ay na waydiinayaana aanu sifada sharciga ah uga jawaabno.”
Maxamed-aamiin wuxuu ku dooday inay Xisbiga UCID ku galeen Sharci isla-markaana ay Sharci kaga baxeen, “Qofku markuu Xisbiga gelayo Sharci buu ku gelaa, Sharcina wuu kaga baxaa, markaa taasi waa tu sharci, Hay’addii ay khuseysay baana Gacanta ku haysa, wixii ka soo baxana waanu ku qanacsannahay, Annaga oo adkaynayna inaanu jirin wax sharciya oo aanu ku gefnay. Haddii Cid sharciga jebisayna waxa Sharciga jebiyey Guddoomiyaha Xisbiga.”ayuu yidhi.
Cabdishakuur Maxamuud Xasan (Ciddin)